Adeegyada Ganacsiga & Maalgashiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Horumarinta Gobolka Washington
Wasaaradda Ganacsiga waxay kobcineysaa gobolka gudaha iyo caalamkaba si loogu abuuro fursado dhaqaale oo cusub jaaliyadaha gobolka oo dhan, oo ay kujirto soo jiidashada ganacsiyada cusub iyo maalgashiga Washington iyada oo loo marayo Istaraatiijiyadda Dooro Washington.
Loo sameeyay si loo siiyo ganacsiyada iyo maalgashadayaasha macluumaad ku saabsan ka ganacsiga gudaha iyo Gobolka Washington, XuloWashington.com waxay bixisaa macluumaad fara badan, oo ay ku jiraan sheekooyinka ku saabsan meheradaha halyeeyga ah ee gobolka, khariidadaha, xogta xulashada goobta iyo faa'iidooyinka tartan ee gobolku siinayo maalgashadayaasha, xulashada goobta iyo ganacsiyada.
Maalgashiga Dibadda ee Dibadda
Gobolka Washington wuxuu siiyaa maalgashadeyaal aqoon leh fursado maalgashi shisheeye oo toos ah. Kooxdayada ku takhasustay maalgashiga ayaa kaa caawin kara inaad dabaysha u mariso habka maalgashiga, laga bilaabo maalgelinta iyo xulashada goobta illaa midowga ganacsiga iyo soo iibsiga.
Gobolka Washington waa # 3 ee loo dhoofiyo Mareykanka Waaxda ganacsiga ee caawinta dhoofinta dhoofinta waxay lashaqeysaa ganacsiyada gobolka oo dhan inay ka furto suuqyo cusub dibada iyo kordhinta iibka iyo shixnadaha alaabada iyo adeegyada ee macaamiisha adduunka.
Meelo badan oo adduunka ka mid ah, ganacsiga waa in lagu qabtaa shaqsi ahaan si loo hubiyo heshiisyada muhiimka ah loona abuuro xiriirro waara. Waaxda Ganacsiga waxay isku dubaridhaa howlgalada uu hogaaminayo Gudoomiyaha Gobolka iyo sidoo kale safarada ganacsi ee muhiimka ah ee dibada.